Zaikabe any Antsirabe : haka fanapahan-kevitra amin’ny fiainam-pirenena ny FFKM | NewsMada
Zaikabe any Antsirabe : haka fanapahan-kevitra amin’ny fiainam-pirenena ny FFKM
Mety ho henjakenjana tahaka ny hafatry ny fivondronamben’ny eveka ary ho mafy raha mitaha amin’ny fehinkevitry ny parlemantera eoropeanina. Hiatrika ny zaikabe fahasivy sy ny komity foibe faha-39 ny eo anivon’ny FFKM amin’ity herinandro ity any Antsirabe. Haka fanapahan-kevitra amin’ny teboka maromaro izy ireo.
Ankoatra ny raharaha anatin’ny fiangonana, tombanana ho anisan’ny horesahina ny fiainam-pirenena ankapobeny, indrindra amin’ny hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona ho avy. Eo koa ny amin’ny dingana efa nirosoan’ny FFKM amin’ny fampihavanana ka hidiran’izy ireo lalindalina kokoa ankoatra ny efa maha eo ny CFM. Mety hakan’izy ireo fanapahan-kevitra ary hamoahana fehin-kevitra hentitra avokoa ireo. Mazava rahateo ny hafatra pantekoty farany teo. “Tena marary mafy ny firenena ary mahatratra ny isam-pianakaviana, ny isam-piangonana, ireo manana andraikitra rehetra eto amin’ny firenena, ny tsirairay izany. Hany azo antenaina hitondra fanavaozana sy fanasitranana ho an’ny firenena ny Fanahy Masina…”, hoy izy ireo.
Tsy fandriampahalemana sy ny kolikoly avo lenta
Mahatsapa koa ny fiangonana fa tsy voahaja intsony ny soatoavina maha Malagasy sy mahakristianina manoloana ireo trangan-javatra mampahonena sy manala baraka ny firenentsika. Anisan’izany ny tsy fandriampahalemana, ny kolikoly avo lenta sy ny tsy fanajàna aina, toy ny fitsaram-bahoaka tsy misy farany, araka ny hafatr’izy ireo. Nohamafisin’ny hafatra tamin’izany fa ny fihavanan’ny olona amin’Andriamanitra ihany no mitondra fihavanana marina eo amin’ny olona samy olona. « Vaindohan-draharahanay hatrany ny fampihavanam-pirenena mifototra amin’ny fiaiken-keloka, ny fibebahana, ny fahamarinana, ny fihavanana (4F)”, hoy ihany ny FFKM. Anisan’ny lohahevitra tamin’ny pantekoty 2017 : “Meteza hampihavanina amin’Andriamanitra ianareo”.
Be loatra ny lainga sy ny fitaka…
Etsy andaniny, anisan’ny navoitran’ny filohan’ny FFKM, ny Mgr Razanakolona Odon ny 26 jona teo fa poakaty ny fahamarinana sy ny fihavanana eo anivon’ny fiarahamonina malagasy. “Be loatra ny lainga sy ny fitaka ao anaty fiarahamonina, tsapa isan’andro izany ary na ny mpitondra sy ny mpanao politika aza misy tena manampahaizana manokana momba io tsy fahamarinana io”, hoy izy. Tsy mandeha ho azy avokoa izany rehetra izany ary hafatra sy fanambarana tamin’ity taona ity. Araka izany, azo antoka fa ho voavely kanonta indray, ankoatra ny hafatry ny eveka sy ny parlemantera eoropeanina ny mpitondra.